Tenga 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC≥98% | AASraw
/ Products / vamwe / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
4.50 kupererwa ne 5	maererano ne 2 kasitoma ratings
SKU: 28292-43-5. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kwe2-Aminoisoheptane (28292-43-5), pasi pemutemo weCGMP uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
2-Aminoisoheptane, iyo inozivikanwawo seDMHA kana Octodrine, yava chinhu chinozivikanwa pakugadzirisa kushanda uye kupisa mafuta kubvira pakutanga kwe2017. Icho chinokurudzira chinotendwa kuti chivandudze simba rako.2-Aminoisoheptane inogadzikana zvakafanana neDMAA. Inowanzowanikwa mukati memakwenzi eChirungu Walnut Tree (AKA. Juglans Regia) ....
2-aminoisoheptane zvakadzama Characters
Makemikari Mazita: 2-aminoisoheptane
Mazita emagetsi: DMHA, Octodrine
2-Aminoisoheptane, sechinhu chitsva chinoshandiswa chinowanzoshandiswa mushure mekuita basa kunowedzera pamwe chete namafuta anopisa. Izvi zvose nekuda kwehuwandu hwahwo hunofadza hwekusimudzira simba uye kubvisa chido.
Simba Kuwedzera Zvipo
2-aminoisoheptane (Octodrine) iri kukurumidza kuwana mukurumbira we simba uye mafungiro ekuwedzera simba. Izvi zvakaita kuti zvive zvakakurumbira seproworkout supplement sezvo ine michina yakawanda inoita kuti iwe uwane zvakanyanya kubva pakushanda kwako: kukurudzira simba mazinga (zvichiita kuti zvive nyore kuzviswededza iwe uye kuendesa mberi, izvo zvinoreva kuti mamwe makoriri akapiswa!), Kuwedzera kukurudzira (zvakawanda zvemasimba hazvirevi chinhu kana iwe usina chido chekushanda), nekuvandudza mafungiro (kana iwe unofara panguva uye shure kwekudzidzira kwako - zvinowedzera kuti iwe uchadzoka wozviita zvakare). Zvimwe zvibatsiro zvinosanganisira kurwadziwa kukuru kwekutsungirira 5,6, kuderera kwehutano hwekuona kushanda kwe5,6, nekuvandudza maratidiyano 3b, 4b, 5b - inowanikwa zvakanaka pakusimudza zvigadziko, kuisa simba kuburikidza nekatsva kana HIIT kirasi, kana kunyange kukakavana vana uye imba yakazara mabasa epamba.
Chimwe chezvinhu zvakanakisisa pamusoro pe2-aminoisoheptane (Octodrine) ndezvokuti izvi zvinobatsira zvakananga nekukurumidza pamusana pemasero ayo. Kuwedzerwa kweboka re methyl paArabhoni kunowedzera huputi hwechikamu - izvo zvinoita kuti zvose zvinyoro-mvura uye zvakasvibiswa. Kuwedzererwa kwepombi inogadzirisa zvinoshamisa kunowedzera kukwanisa kwayo kupfuurira kuburikidza nechepfungwa yeruzivo rweropa iyo inokwanisa kushandisa simba rayo-kukurisa uye euphoric.8,9
Kurasikirwa kweUkurasikirwa Kwemafuro
2-aminoisoheptane (Octodrine) inogonawo kubatsira kukura nekurasikirwa kwemazivo nemhaka yekukwanisa kuderedza chido pamwe nekuvandudza mafungiro ako nekuwedzera mahomoni anokonzera kukuita iwe "unofara" 4b, 5b (taura zvakanaka kutengesa zviitiko zvinokonzerwa nekutambudzika uye kunzwa pasi!).
2-aminoisoheptane (Octodrine) 's mood enhancing benefits inobva pakukwanisa kwayo kuwedzera dopamine uye norepinephrine mazinga, izvo zvinokonzera kuwedzerwa kwemhepo uye kumuka.3b, 4b, 5b, 6b. Saizvozvowo mukugadzirisa uye kushandiswa kwemagetsi kunobatanidza neklassical monoamine neurotransmitters, 2-aminoisoheptane (Octodrine) inogona kuita kuti muve neamine yakagadziriswa receptor 1, nepo ichidzivirira kwenguva pfupi reuptake ye dopamine uye norepinephrine mumuviri we presynaptic - kuvandudza "punch" uye simba rinogara.
Mukuwedzera, vashandisi veDMHA vaudza chirwere chakanyanya kupera uye kuderedza kuneta, nokudaro vachibvumira vashandi kuwana zvikomborero zvakanyanya kubva mukushanda kwavo.2-aminoisoheptane (Octodrine) inokurudzirawo kukurudzira kuita chimwe chinhu. Sezvatotaurwa, DMHA inokonzera kusunungurwa kwe dopamine. Dopamine mazinga anokanganisa mafungiro ehupenyu uye chido chinotevera. Kukurudzira kune chido chekuita chimwe chinhu apo kuda kuve kuzvipira. Munhu angada kufarira chimwe chinhu, asi kana vakatarisana nezvipingamupinyi munzira, ipapo vanogona kusiya. Zvisinei, kana munhu aine chido, saka haazodziviriri kubva pamhosva yacho kusvikira vasvika pane zvavanenge vachida kuita. Ndinofara, dopamine, iyo kusunungurwa kunokonzerwa nekudya kwaDMHA, inoita kuti iwe uye zvose zvinokurudzira uye chido chekuzadzisa zvinangwa zvako.
Kubatanidzwa kwemigumisiro inowanikwa pakushandisa DMHA inopa rubatsiro rwekugadzirisa kwekushanda, naizvozvo inowedzera kuiswa mune zvakasiyana-siyana zvekushanda, pre-workout supplement and drinks.
Ndeipi muyero we2-aminoisoheptane
Icho hachiri nehutungamiri dosing purogiramu inowanika kune iyi inoshandiswa. Izvo zvakaomawo kutaurira kuti yakawanda yeiyi makambani anokurudzira ari kushandisa sezvo yakatovhiringidzika mukati mezvigadzirwa. Zvisinei, inogona kuva bheti yakachengeteka kuti iise chimwe chinhu pakati pe100 kusvika 300mg.
Nguva dzose yeuka kuti 2-aminoisoheptane inogona kushandiswa musati wadzidzira, asi inogona kushandiswawo zuva rese. Sezvo chiri chinhu chinokurudzira, edza kudzivisa kushandisa iyo usati warara nokuti zvinogona kuvhiringidza kurara kwako kwese kurara.
Kuti tibatsirwe nekushanda kwekusimudzira zvinhu zve 2-aminoisoheptane (DMHA), inonyatsoshandiswa inenge maminitsi 15-30 isati yasvika. Zvichida, kana yakashandiswa kakawanda nokuda kwezvokudya zvinodzvinyirira, 2-aminoisoheptane (DMHA) inogona kushandiswa mukati mezuva pakati pezvokudya. Zvisinei, isu tinokurudzira kuchenjerera kana uchishandisa ichi chigumo mambakwedza kana masikati manheru, sezvo inogona kukanganisa kukwanisa kwako kurara.
Iyo 2-aminoisoheptane inoshanda sei
2-Aminoisoheptane (DMHA) inoshanda nenzira yakafanana zvikuru kune DMAA yakakurumbira. Kubva pakurongwa, hukama hweHNUMX-Aminoisoheptane (DMHA) hunozivikanwa se monoamine kubudisa vashandi. Aya ndiwo mapurisa ane simba rekuwedzera mazinga emamwe monoamines. Aya ndiwo dopamine uye noradrenaline. Inoshanda kuburikidza nekuwedzera dopamine uye noradrenaline inowedzera panguva imwecheteyo nekuderedza reuptake kuburikidza nekushandiswa kwekucherechedza amine yakagadzirirwa receptor. Izvi zvinonyanya kusimbisa simba ravo rekubatanidza kune avo vanogamuchira kuchengetedza monoamines inoshanda kwenguva refu. Ndicho chikonzero iwe une nguva refu, yakagadziriswa. Chimwe chinowanzoonekwa pakati peDMAA ne2-Aminoisoheptane (DMHA) kuwedzerwa kwema-methyl pa alpha carbon iyo inokonzera kukonzerwa kwemonoamine oxidase (MAO), inowedzera kuwirirana kwechigadzirwa ichi, pamwe chete nekubatana kwayo kwekatecholamine vatakuri vemitambo.Zvino zvinoreva kuti hafu yenguva yehupenyu ichave yakareba, ichapfuura kuburikidza neropa reuropi chidziviriro nyore nyore, uye ichava nehukuru hunokurudzira huwandu.
Izvo zvitsva zvinokurudzira zvinobuda mumutumbi wekuvaka muviri mu 2016! Iko 2-aminoisoheptane, iyo ichangobva kuwanikwa yeDMAA inoshandiswa pakuwedzera simba nekudzivisa kudya. Mutambo weChitsva wekutanga wekushanda wekuvandudza unove wekutaridzika kwezviuru zvevashandi vemasangano nevatambi.
Heino mimwe migumisiro yakaipa ne2-aminoisoheptane:
Dypsnea (Shortness Breath)
Inonzi 2-aminoisoheptaneIne Mimwe Miviri Yakaoma
Sezvo 2-aminoisoheptane ichitsva kumakambani emitambo yezvokudya, hapana misi mikukuvadza yakataurwa. Tingazvienzanisa neDMAA. Zvimwe zvisingadikanwi zvinogona kuitika pamwe nehovha yakakwirira ye2-aminoisoheptane, somuenzaniso, kukwira kwemoyo kunokwidziridzwa, kuwedzerwa kweropa rekumanikidza uye kunetseka kufema. Kungofanana neipi ipi inokurudzira, zvakanakisa kutanga nehana shoma kuti uwane rusununguko rwako rwekunzwira tsitsi uye kunzwisisika kune chikamu.
Nzira yekutenga 2-aminoisoheptane kubva kuAASraw